Gabadh Ay Walaalo Yihiin Madaxweyne Obama Oo Ka Mid Ah Martida Sannadkan Ee Carwada Buugaagta Hargeysa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Gabadh Ay Walaalo Yihiin Madaxweyne Obama Oo Ka Mid Ah Martida Sannadkan...
Dr. Auma Obama oo ay walaalo yihiin Madaxweynihii hore ee Maraykanka Mr. Barak Obama ayaa ka mid ah martida sannadkan ee carwada buugaagta Hargeysa oo ay qabato sannadkiiba hal mar xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Dr. Auma oo ah qoraa, saxafiyad iyo shakhsiyad caan ah oo u dhalatay dalka Kenya ayuu socdaalkeedani noqonayaa kii u horeeyay ee ay ku timaado Somaliland, waxaana sannadkan soo martiqaaday xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Dr. Auma Obama ayaa shalay khudbad ka jeedisay madasha oo uu furitaankeedu shalay ahaa.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ayaa martida sannadkan ka soo qayb gashay carwada waxa uu habeen hore ku soo dhaweeyay casho sharaf.
Dr. Auma Obama waxa ay ku celcelisey in sida kaliya ee Afrika ay kaga baxayso dhibka ay tahay in ay u fekerto Afrikaan ah, xalku in uu gudaha ka yimaaddo, kana madax bannaanno in debedda la innaga daweeyo oo dhibkeenna xalka looga doono in uu debedda ka yimaaddo.
“Waa in ay beddelno fekerka ah inaynu ku noolaano deeq la inna siiyo iyo cid inna hormarisa, waayo cidina bilaash kuu horumarinayso. Fiqiirnimada aan ku noolnahay waa inaynu aqbalnaa oo aynu dedaalkeenna kaga baxnaa, oo aanayu ku xisaabtamin cid innaga saarta.”
“Kuwa ka imanaya China, Europe ama America wax aan u arkaa kuwa u yimi qaaraddeena in ay ka arkaan fursado uga bannaanada dadkooda, shirkadohooda amase arrimahooda gudaha ee siyaasadeed ama degganaansho. Waxa ay u hanqaltaagayaanaa macdanteenna, midheheenna, xooggeena, taasina waxba kagama duwana sidii xilligii gumaysiga.”
“Afrika waxa loola dhaqmaa oo adduunku u arkaa sidii ay tahay waddan kaliya. Waa in aynu taa ka dhiidhinaa oo u sheegnaa in Afrika aanay ahayn dal ee ay tahay qaarad, waa inay arkaan, maqlaan oo fahmaan in markaan ku daro Somaliland oo madaxbannaan, ay ka kooban tahay 55 dal oo mid kastaa leeyahay dhaqankiisa, ahaanshihiisa iyo dabeecadihiisa u gaarka ah”
Previous articleFaah Faahin:-Qaraxii Ka Dhacay Magaalada Muqdisho + Daawo meesha Qarax ku dhacey
Next articleMasaajid La Dhisay 2 Sano Kaddib Geeridii Nebi Muxamed (SCW) Ayaa Laga Helay Dhulka Ay Israa’iil Haysato
Diyaarada Itoobiya oo joojisey duulimadadeedii Soomaaliya Halka somaliland aaney Joojin